Xidhitaankii xawaaladaha soomaalida oo weli sii socda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bilowga Cutubyada dhammaan Keydka qoraalka
sawir: Mona Ismail Jama/Sveriges Radio
Xidhitaankii xawaaladaha soomaalida oo weli sii socda
La daabacay onsdag 17 april 2019 kl 14.51
Sida aad ku maqasheen barnaamijyo horay idaacadda uga baxay ayaa bilihii ugu dambeeyay la xidhay koontooyinkii ey ku lahaayeen bangiyada dhowr xawaaladood, khaasatan bangiga Swedbank.
Raadiyaha Iswiidhan laanteeda afka soomaaliga ayay soo gaadheen warbixinno sheegaya in xidhitaanka koontooyinka xawaaladahu halkoodii ka sii socdaan. Bangiyada Nordea iyo SEB ayaa todobaadyadii ugu dambeeyay bilaabay in ay iyaguna xidhaan koontooyinka shirkado hor leh.
-Bil walba dhowr boqol oo doolar ayaan ehelkeeyga oo Soomaaliya jooga u diraa. Waan ka welwelsanahay xawaaladaha la xidhay, waayo sidee ayaan lacag ugu diri karaa Soomaaliya. Sida ay sheegtay Saida Jama oo aan suuqa xaafada Tensta kula kulanay.
Habane Hassan, gudoomiyaha ururka isbaheeysiga ummada somaaliyeed ee Iswiidhan ayaa sheegay in bangiga ugu badan ee koontooyinka xawaaladaha ka xidhay uu ahaan jiray Swedbank, hase yeeshe bangiyada Nordea iyo SEB ey bilaabeen iney toddobaadyadii ugu dambeeyey xidheen koontooyin tobaneeyo gaadhsiisan ee xawaaladuhu lahaayeen.
Sababta ayaa ah sida ay bangiyadani u jeedaan in shirkaduhu aaney cadeeyn karin in lacagaha ay u xawilaan Soomaaliya aan lagu maalgelin ururada argagaxisada ee carrigaa ka howlgala.
-Maadama bangiga Swedbank ahaa bangiga koontooyinka ugu badan xidhay halkaas ayaan xooga saarnay, laakiin Nordea iyo SEB ayaa hadda bilaabay in ay iyaguna xidhaan qaar ka mid ah koontooyinka shirkadahan. Waxaan dareemaya in welwelka shacabka uu sii badanayo, ayuu yidhi Habane Hassan oo gudoomiye ka ah ururka isbaaheeysiga ururrada somaaliyeed ee Sweden.
Ilaa bishii febraayo ayey bangiyada Nordea iyo SEB xidheen tiro ah koontooyin tobaneeyo kor u dgaafata sida uu sheegay Habane Hassan, hase yeeshee ay laanta idaacadda soo gaareen qoraalladii afar ka mid ah koontooyinka xawaaladaha ee la xirey.
Sidaas daraadeed ayey shirkadaha xawaaladuhu todobaadkan qaban-qaabin doonaan shir lagaga hadli doono xidhitaanada koontooyinka xawaaladaha islamarkaana la dooran doonaa afhayeen arrinkan kala xaajooda siyaasiinta iyo hayadaha dawliga ah ee arrinkani uu quseeyo.
-Annaga oo ah ururka isbaheeysiga ururrada soomaaliyeed waxaan la kulanay siyaasiin sidoo kale wadahal ayaa nooga socda dhinaca bangiga Swedbank, waxaan rajeeynaynaa in aannu sida ugu dhakhsada badan wadahadal ula furno bangiyada Nordea iyo SEB.
Mubarik Osman ayaa bil walba Soomaaliya u dira 500 oo doolar. Sidan ayuu ka sheegay xidhitaanka koontooyinka xawaaladaha dalkan.
-Aad baan uga xumahay in xawaaladahan la xidhay. Waxaan jeclaan lahaa in dhowaantan la abaabulo mudaharaad looga soo hor jeedo falalka bangiyada.